I-Fate Of Stub Izihloko Nge-Wiki - I-Semalt Answer
i-Wikipedia iyindawo yokugcina evulekile kakhulu yokunikeza ukufinyelela mahhala kolwazi oluphezulu lwezinhlobo zonke kubasebenzisi abavela emhlabeni wonke. I-Wiki inezinhlobonhlobo zezihloko zezemfundo nezombusazwe. Muva nje, abahleli be-Wiki kanye nabavolontiya baqala ukungqubuzana okukhulu mayelana nokususwa kwe-athikili emithathu eline-website ye-Wikipedia.
uJulia Vashneva, Semalt iMenenja yeNtuthuko yabaThengi, uthi inkulumo ephathelene neprotheyini yegazi "i-Hemovanadin" ibilokhu ingxoxweni ngemuva kokuba abanye abahleli baqale isinyathelo sokuthi kususwe lesi sihloko ku-Wikipedia. Ngokusho kuka-Andrea James, lesi sihloko siye savuselelwa kuwebhusayithi. "I-Hemovanadin" iyisihloko sesayensi esinikezwe kahle kakhulu esibaluleke kakhulu kubafundi nabafundi.
U-Andrea James wachaza ukuthi isihloko esithi "Hemovanadin" sasibhekene nesimo esibi kakhulu se-Wiki esibizwa ngokuthi "ukususa." Ukuqeda ulwazi olubalulekile kusuka ku-Wikipedia luyisongo esikhulu emkhakheni wezemfundo osebenzisa i-Wiki njengomthombo wabo wokubheka. Sekuyiminyaka engaphezu kwengu-14, i-Wikipedia isihlinzeke ngolwazi oluhle kakhulu kumakhasimende avakashela isayithi nsuku zonke ukuze athole ulwazi.
Ukuqonda ukuthi i-Wikipedia isebenza kanjani
Ukususwa kuyimbono eyinkimbinkimbi engaqondwa kuphela ngokulandela nokulandela indlela usebenza ngayo i-Wiki. I-Wikipedia iqhutshwa ngumphakathi owenziwa ngamavolontiya nabahleli ababeka izinqubomgomo nemikhombandlela elawula ukusetshenziswa kwe-Wikipedia. Abahleli bakhiqiza futhi bahlele ama-scholarly articles atholakalayo ku-Wiki.
Ukuze kufakwe kwi-Wikipedia, imibono kufanele ihlangabezane nemigomo nemithetho ebekiwe. Kodwa-ke, le ndlela iyahlukahluka ngokuya ngesihloko. Ngokwesibonelo, emkhakheni wezemfundo, izindinganiso ezingabonakali zibonakala. Kweminye imikhakha, ukuhlelwa nokususwa kwezihloko kuyahlukahluka ngokuya kokubona kwabahleli, okwakunjalo nge-athikili ye "Hemovanadin".
i-Wikipedia iqhutshwa ngesisekelo sokuthi izisebenzi zokuzithandela ziyaqonda izinqubomgomo nezinkombandlela zayo. Noma kunjalo, amavolontiya ahlukene ahumusha lezi zinqubomgomo ngokuhlukile, isimo esimweni esiholela ekususeni. Abahleli bazibophezele futhi abasebenzi abazinikezele basebenzela inhlalakahle yesayithi. Nokho, abantu benza amaphutha, ngakho-ke ama-Wikipedians.
I-Hemovanadin yisibonelo sendaba eyayihlanganiswe kwi-Wikipedia kuphela ukuze ithuthukiswe futhi ihlelwe kamuva. Noma kunjalo, izindinganiso zokungafaneleki kufanele zibekwe ukukhawulela ukulayishwa kwezinto ze-scholarly ezihluleka ukuhlangabezana namazinga. Ukususa izinto ezihlanganisiwe kukhululekile kakhulu uma kuqhathaniswa nokudala izihloko ezintsha. Ukususa izihloko zezinhlanga ezidalwe abahleli abasha kungahle kuphazamise, ikakhulukazi lapho kususwa khona futhi abahleli abatholi incazelo yokuthi kungani ama-athikili abo asuswe ku-Wiki.
Inombolo eningi yezihloko ezinamathebhu incike eminikelweni encane. Ukwenza okuningi ukuhlela kwesigaba esithile kuguqula isimo sokuqala sombhalo. Njengamanje, abahleli benze iminikelo ethinta engqondweni ukuthi ngenxa yokuthi i-athikili inezinhloli eziqinisekisiwe, ayihlangabezani namazinga okungaqiniseki ngokuzenzakalelayo. Nazi amathiphu ukuthi izihloko ezinamathebhu zingalungiswa kanjani ukuze zigweme ukususwa.
Ukuhlunga ama-stub izihloko kuye ngezihloko
Ukuthuthukisa nokubeka izihloko zezintambo zokunwetshwa
Isingeniso semibala ehlukene ukubeka izixhumanisi eziholela ezihlokweni zezintambo
Ngokwamaqiniso, ukungeza ulwazi oluwusizo ngezihloko zezintambo kungcono kakhulu kunokususa yonke into evela ku-Wiki. Isitayela se-athikili futhi siyindaba. Hlola izihloko ezingafani nesitayela sezinhlamvu ze-encyclopedic zisengozini yokubhekana nokususwa Source .